Ukudlala ku-Linux: OpenArena | Kusuka kuLinux
Ngikhumbula ngenkathi ngisasebenzisa I-Wintendo, ukuthi omunye wemidlalo engiyithandayo kakhulu Ukuzamazama iii. Isikhathi sihambile yize ngidlale kancane kancane, sengivele ngisebenzisa Linux Ngikukhumbule ukushaya amakhanda ezitha zami.
Kungaleso sikhathi-ke lapho ngisesha futhi ngiseshela, ngathola ukuthi ku I-GNU / Linux besine "Clone" eqanjwe I-OpenArena, Okuyinto kwase kuqala wadedelwa ngemuva kosuku ikhodi yomthombo i-del injini yesithombe de Ukuzamazama iii ikhishwe ngaphansi kwelayisense I-GPL.
Kube yisikhathi eside futhi I-OpenArena iyaqhubeka nokuvuselelwa, iya ngokuya iba nsuku zonke iyindlela enhle kakhulu yokuzijabulisa.
I-OpenArenaKuze kube manje, (inguquko engu-0.8.1) inamamephu angama-45 (amamephu ayi-16 e-CTF namamephu angama-29 DM) nezindlela zemidlalo eziyi-12: iDearmatch, iTeam Deathmatch, Thatha iFulegi, uhambo, ifulegi elilodwa, umvuni, ukulayisha ngokweqile, ukuqeda, ukuqedwa kwe-CTF , Umuntu Wokugcina Omile, Ukubusa Kabili Nokubusa. Izindlela zemidlalo ezi-4 zokuqala zibuye zivele kuQuake III: Arena, kuyilapho ama-5 okugcina enezelwa okusha futhi izindlela ezi-3 ezisele zivela eMissionpack Quake III: Team Arena. Futhi kufakiwe (kusuka ku-v0.8.0) ukwethulwa kokuqala kwe-missionpack ukufaka esikhundleni se-Q3 yokwanda: Team Arena, eletha izici ezintsha eziningana.
Inqubo yokufaka ilula kakhulu. Ku- I-LMDE (futhi ngicabanga ukuthi in Ubuntu), vele uvule ukuphela bese ubeka:
Silungele, ukujabulela sodwa, noma ngamaqembu .. 😀
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Imidlalo » Ukudlala ku-Linux: OpenArena
Qaphela ukuthi ungangeni okhunjeni huh ?? Lokho kwenzeka kimi futhi angizange ngiphume ekamelweni ngaphandle kokudla, ngidle isidlo sakusihlwa futhi ngizikhulule, kusukela ngo-9 ekuseni kuze kube ngu-11 ebusuku ngaphandle kokuma.
Oxwayisayo akayona imbuka
I-LOL. Sengivele ngadlula kulokho. Futhi, angikwazi ukudlala lolu hlobo lwemidlalo kuMuntu Wokuqala kakhulu, ngoba ikhanda lami liqala ukulimala ... ngithanda isivinini ..
Kungenza ngifune ukuhlanza, hahahaha ngaphezu kwesisodwa ngenxa yokuba ne-FPS enhle kakhulu bekufanele ngigijimele endlini yangasese (ngizama ukukugwema, kepha kukhona okuhle), njengoba kukhona okunye okungangenzi isiyezi. Yize kunezinye izinto zokuzijabulisa ngaphandle kwemidlalo ye-gnu / linux.
hahahahaha Ngibe nesiyezi ngeDoom ... kepha uthando ebengiluzwa lokuchoboza izingebhezi beluhlala luqina, angikaze ngidlale iQuake isikhathi eside, mhlawumbe manje yisikhathi esihle sokuyiqala kabusha.
Impela ngeke uzisole. Futhi ukuthi angikwazi ukuyidlala ku-Full Graphics .. 😀
Isiqondisi esisha sezinhlelo zokusebenza zamahhala ze-FSF eziyi-100%